Wellistooti Oromoo Welluu Haaraan Dhiyaatan!
Date: March 11, 2012Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, 11 Bitootessa 2012) Yeroo Ilmaan Nafxanyootaa bakka mara irraa wal funaantee, Oromiyaa dhiigaa fi lafee jaallan qaqqaaliin ijaaramaa jirtu, diiguuf abbalaa jiranitti, wallistooti Oromoo hedduun meeshaa muuziqaa isaaniitiin Oromoo fi Oromiyaa diina irraa akka tiksan agarsiisaa jiran.
Biyya keessaa ilmaan Oromoo akka Taaddalaa Gammachuu, Hacaaluu Hundeessaa, fi Meetii Jamamaa welluu isaanii Oromummaa leellisuu fi faarsuun Oromoo fi Oromiyaaf wabii dhaabbataa ta’uu isaanii mul’isanii jiran.
Sirboota baaqqee wellistoota Oromoo torban kana keessa bahan keessa kan Hirphaa Gaanfuree Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi qabsoo Bilisummaa Oromoo faarsuu fi leellisuun gadhiise sadarkaa duraatti ilaalamaa jira.
Previous Previous post: Qeerroon Faaruu Warraaqsaan Tumsame
Next Next post: The regime in Ethiopia bears full responsibility for the monstrous murder of Miss Dachaasaa